It is me. Ko Niknayman.: နအဖရဲ့မီဒီယာကို မီဒီယာနှင့်တိုက်ခြင်းအကြောင်း။
နအဖသည် သတင်းအတုအယောင်များအား ဖန်တီးကာ သတင်းဌာနများသို့ပေးပို့ နေခြင်း၊ ပြည်ပ သတင်း ဌာနများအား ပြည်သူလူထုမှ သတင်းယုံကြည်မှုလျှော့ပါးစေရန် ဆောက်ရွက်နေခြင်းတို့ မှာ အခုအချိန် အခါမှ စတင်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် -အတုအယောင်အမျိုးသား ညီလာခံအား ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အား ဆန့် ကျင်ပွဲများ၊ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် အင်အားစုများအား စွပ်စွဲပြောကြားချက်များအား ၄င်းတို့ ပိုင် သတင်းစာများ၊ ရေဒီယိုများ၊ တီဗွီများနှင့် အင်တာနက်များတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖျား ပြောဆိုနေ ကြသည်မှာလည်း အထူးအဆန်းမဟုတ်ပေ။ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်သည်။
ယုတ်စွအဆုံး ညစ်ညမ်းသောစကားလုံးများဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပင်လျှင် အမျိုး သမီးသိက္ခာထိခိုက်စေသော စကားလုံးများသုံးစွဲကာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့သည်မှာလည်း မြန်မာပြည်သူများသာ မက နိုင်ငံတကာကပါ သိရှိခဲ့သည်။
ဘလော့ဂါများ၏ သတင်းမှန်ထုတ်လွင့်နိုင်မှုအား တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် နအဖမှလည်း ဘလော့ များပြု လုပ်ကာ ၄င်းတို့ မူဝါဒအမှားများအား ရေးသားခြင်းပြုလုပ်ရုံသာမက၊ အခြားသောဘလော့များတွင် နာမည် အတုအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀င်ရောက်ရေးသားကာ ညစ်ညမ်းစကားလုံများသုံးစွဲခြင်း၊ မကောင်းသောဓါတ်ပုံများပေးပို့ ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ် များထည့်သွင်းခြင်း၊ အခြားသူများ၏ အီမေးများ ဖိုရမ်များ ၀က်ဆိုဒ်များအား ခိုးဝင်ကြည့် ရှုခြင်းပြုရုံသာမက ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။
ဘလော့များ၏ စီဘောက်များတွင် ၀င်ရောက်ဆဲဆိုခြင်း၊ ရန်တိုက်ပေးခြင်း၊ သတင်းအမှားပေးပို့ ခြင်း၊ သတင်းမှန်လမ်းကြောင်းအား အာရုံလွှဲ ပြစ်ခြင်း၊ နာမည်အတုများဖြင့် ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်ရုံမက အခြား သူများ ၏အမည်များ အီးမေးလိပ်စာများအားယူသုံးကာ ပုံမှားရိုက်ရေးသားခြင်း၊ ထိုသူများအား သိက္ခာကျစေ ရန် ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုနေကြသည်မှာ တွေ့ မြင်နေရသည်။
ဘလော့ဂါများဘက်မှလည်း ပြည်သူလူထုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် နအဖ၏ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများအား ကြိုတင်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုပြရလျှင် -သြဂတ်စတင်းကျောင်းမှ ကျောင်း အုပ်များအား ဖိအားပေးပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ကျောင်းမတက်မနေရ ခိုင်းစေကာ ကျောင်းသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ စာသင်ခန်းထဲတွင် စာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်း လုပ်ကြံဖန်တီးကာ သတင်း လန်ကြုတ် အဖြစ် ဖန်တီးမည်ဟု ဘလော့ဂါများ သိရသောကြောင့် ချက်ချင်းဖေါ်ထုတ်နိုင်ကာ နအဖ၏ ကလိမ် ကျစ်လုပ်ဆောင်မှုအား ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား အချိန်မီ သတိပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လူထုဆန္ဒပြသူများ လုံခြုံရေးအတွက်လည်း နအဖ၏ လှုပ်ရှားမှုခြေလှမ်းများနှင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမည့် ပြင်ဆင်မှုများကို ဖေါ် ထုတ်ကာ ပြည်သူလူထုထံ ကြိုတင်သတိပေး နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့ ကြောင့်နအဖသည် ပြည်သူလူထုနှင့် ဘလော့များ၊ သတင်းဌာနများ ချိတ်ဆက်ပြီး သတင်းပိုင်းဆိုင်ရာများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အင်တာနက်အမြန်နှူံးအား လျှော့ချခြင်း၊ အချိန်ုပြည့် နောက်ကွယ်မှ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာအင်တာနက်သုံးစွဲမှုအား ကန့် သတ်ချုပ်ခြယ်ခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်ရုံသာမက နောက်ဆုံးတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ထောင်ချသည်အ ထိ ကျူးကျူးလွန်လွန် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် နအဖသည် သတင်းမှားများပေးပို့ ခြင်းနည်းလမ်းအား လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ဓါတ်ပုံအတု များကို အသုံးပြုပြီး၊ သတင်းဌာနများနှင့် ဘလော့ဂါများ အီးမေးလ်သို့ပေးပို့ ကာ လုပ်ကြံ ဖန်တီး တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ နအဖ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သတင်းမှန်များအား ယုံကြည်မှု လျှော့ ပါးစေရန်ဖြစ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်သတင်းပေးပို့ သူများအပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းပါးစေရန်နှင့် သတင်း တင်ပြ သူများ အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိစေရန် နအဖမှ လုပ်ကြံဖန်တီးလျက်ရှိသည်။
သတင်းအမှားများပေးပို့ ရာတွင် ဥပမာအားဖြင့် လူထုဆန္ဒပြမှု အရှိန်အဟုန်ကောင်းနေစဉ်အတွင်း တပ်မ (၃၃)မှ ပြည်သူ့ ဘက်ပူးပေါင်းကာ စစ်တပ်ခြင်း အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားနေသည့် သတင်းမှားအား၎င်း၊ သန်းရွှေနှင့် မောင်အေး သဘောထားကွဲလွဲနေကာ မောင်အေးမှ အာဏာသိမ်းကြောင်းသတင်းမှားအား၎င်း၊ စိုးဝင်း စင်္ကာပူတွင် သေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းမှားအား၎င်း၊ ကုလကိုယ်စားလှယ်ရောက်ခါနီးအချိန်တွင် ပြည်သူများ မိမိတို့ အိမ်အတွင်းနေပြီး မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်သင့်ကြောင်း စာအား၎င်း၊ ရဟန်း ဘုန်းဘုန်းတို့ မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်းကာ လက်နက်ကိုင်တိုက်တော့မည်ဟု၎င်း -စသဖြင့် လုပ်ကြံ ဖန်တီးကာ သတင်းမှားများ ထုတ်လွင့်ပေးပို့ ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ဓါတ်ပုံများ ပြသခြင်း ပေးပို့ ခြင်းဖြင့်လည်း ပြည်သူအများ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများအား သိက္ခာကျစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၀ါးလုံးရှည်ကိုင်ကာပြနေသည့် ဘုန်းကြီးအတုဓါတ်ပုံများအား၎င်း၊ ကြံ့ ဖွတ်ကားအား အုတ်ခဲဖြင့် လှမ်းထုနေသောဓါတ်ပုံများအား၎င်း နအဖ ဘက်တော်သားများဘက်မှ စတင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သည်။
လတ်တလောတိုက်ခိုက်မှုအနေဖြင့် ကားနှင့် ကြိတ်သတ်သည့် သတင်းပုံအား ရှေးဦးစွာ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် နစ်နေမန်းနှင့် မျိုးချစ်သို့လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ပေးပို့ လာခဲ့သည်။ စာထဲတွင် ရန်ကုန်က ပုံဟုသာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဓါတ်ပုံရရခြင်း သေချာစွာ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ရှူခဲ့ရာတွင် ကားနံပါတ်အား သိသိသာ သာမမြင်နိုင်စေရန်အတွက် ၀ါးတားတားလုပ်ထားပြီး၊ ဓါတ်ပုံ၏ resolution အား လျှော့ချထားခဲ့သည်ကို သတိ ထားမိပြီး ဖြစ်သည်။ ကားဘီးတာရာတွင် သွေးများပေကြံမှုမရှိသည်ကိုလည်း သတိထားပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၄င်းဓါတ်ပုံများအား အီးမေးလ်မှ ရရခြင်းမတင်ဘဲ မည်သို့ မည်ပုံ အင်တာနက်ပေါ်သို့ တစ် ဆင့်ရောက်ရှိလာကာ သတင်းတင်သူများအပေါ် ပြန်လည်ရှုတ်ချတိုက်ခိုက်မည်ကို စောင့်ကြည့် နေခဲ့သည်။ မှန် ကန်သော သတင်းဌာနများနှင့် ဘလော့ဂါများမှ သိလျှင်သိခြင်း ၄င်းဓါတ်ပုံအား ပြန်လည် ပယ်ဖျုက်လိုက်သည်။ သိူ့ သော် သတိမမူမိသောသူများမှ အင်တာနက်ပေါ်တွင်၎င်း၊ စာစောင်များတွင်၎င်း မှားယွင်းစွာ ဆက်လက် ဖေါ်ပြမိလျက်ရှိသည်။
သို့ သော် ယခုကဲ့သို့နအဖ၏ ယုတ်မာသော မီဒီယာတိုက်ခိုက်မှုအား အများပြည်သူ ထင်ထင်ရှားရှား သိသိ သာသာ သိစေရန်နှင့် နအဖဘက်တော်သားများအား ဖေါ်ထုတ်ရန်အတွက် နစ်နေမန်းမှ မိမိ၏ ဘလော့ပေါ်သို့ တင်ပြခဲ့သော်လည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် ပိုမိုအထင်မှားနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဓါတ်ပုံအတုများအား ပြန် လည် ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။ နစ်နေမန်းအား သတိပေးအကြောင်းကြားလာသူ မိတ်ဆွေများအားလုံးအား အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
နစ်နေမန်းနှင့် အခြားသော မိတ်ဆွေဘလော့ဂါအား သတင်းမှားများတင်သူအဖြစ် ဖိုရမ်များတွင် နအဖ ဘက်တော်သားများဘက်မှ လုပ်ကြံပြောဆိုနေခြင်းအား လွန်ခဲ့သောလကတည်းက တွေ့ မြင်နေရပေသည်။ သို့ သော် ပြည်သူများအနေဖြင့် နအဖ၏ကေက်ကျစ်သောပြောဆိုမှု သွေးထိုးမှု ပုံမှားရိုက်မှုများကို သိနေကြသဖြင့် ပြန်လည် တုန့် ပြန်ပြောဆိုသောအခါတွင် အဆိုပါ နအဖလက်ပါးစေများ နောက်ဆုတ်သွားကြပေသည်။
ထို့ ကြောင့် နအဖ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးမှ ပြောဆိုခဲ့သည့် မီဒီယာအား မီဒီယာနှင့် တိုက်မည် ဟုပြော ကြား ခဲ့ခြင်း မှာ စစ်မှန်သောမီဒီယာအား ၄င်းတို့ ၏ ကောက်ကျစ်သောမီဒီယာဖြင့် တိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ ကိုယ်ကျိူး အတွက် အသုံးချသောမီဒီယာမှာ ကလိမ်ကကျစ်နည်းသုံးကာ အထူးယုတ်ညံ့ရိုင်းစိုင်းသည့် လိမ် လည်လှည့်ဖြားမှုအခြေခံသော မီဒီယာပင်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်မှန်သော မီဒီယာတန်ဖိုးများ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သိက္ခာမဲ့စွာ အသုံးချခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သတင်းဌာနများ၊ ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများ၊ အီးမေးအုပ်စုပိုင်ရှင်များ၊ ဘလော့ဂါများ အနေဖြင့် စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် အင်တာနက်ရန်သူ (သို့ )မီဒီယာရန်သူ နအဖနှင့် ၄င်းတို့ ၏ လက်ပါး စေများအား သတိကြီးစွာထားပြီး ဆန့် ကျင်တိုက်ထုတ်ကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။
မည်သို့ ပင်နအဖမှ ယုတ်မာကောက်ကျစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ပြည် သူ များ၏ စစ်မှန်သော သတင်းတင်ပြမှုများအား လေးစားယုံကြည်စွာဖြင့် ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများ၏ သတင်းအစစ်အမှန်နှင့် နအဖ၏ အတုအယောင်လုပ်ကြံသတင်းများအား ကျွန်ုပ်တို့ မှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါသဖြင်၊့ ပြည်သူများရော ကျန်ုပ်တို့ ပါ ပိုမိုစည်းလုံးစွာ စစ်မှန်သော မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၊ သတင်းအကြောင်းအရာများအား ဆက်လက်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 8:49 PM